Nkọwapụta -lọ ọrụ-NingBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
SUNSOUL jikọtara nnukwu mkpa maka ịzụlite ikike dị n'ime na mmekọrịta onye ọrụ. dị iche iche okike Taya Mmezi Kit, Automotive wheel nut bolt, Wheel spacer na nkwụnye na Auto Mmezi Ngwaọrụ na Machines. Anyị abụghị naanị onwe anyị na-akwalite ụdị SUNSOUL, kamakwa na-enye ngwaahịa ndị ahaziri maka ndị ahịa ODM.
SUNSOUL na -emepụta uto uru site na pọtụfoliyo azụmaahịa iji hụ na ịga nke ọma ga-aga n'ihu. Anyị na-achụso izu oke na ịdị mma. Pụrụ iche ọrụ bụ ntọala nke ụlọ ọrụ ịga nke ọma. Ihe eji mara omenaala anyi bu na ndi nwetere onwe ha, nghọta na nsopuru ha. Anyị na-agba ndị ọrụ ume ka ha nwe ma nwee ọnụ ụlọ ọrụ.
SUNSOUL nwere ekele nke ukwuu maka nkwado nke ndị mmekọ anyị niile. Anyị na-ekele ndị otu maka onyinye ha ma chọpụta uru anyị bara na ikpo okwu a. Kwe ka ahụmịhe anyị jeere gị ozi. Ka anyị rụkọta ọrụ iji mezuo nrọ anyị.